अर्थ समितिकाे अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन- एनसेलसँग ७२ अर्ब ५८ करोड तत्काल उठाऊ ! - YesKathmandu.com
अर्थ समितिकाे अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन- एनसेलसँग ७२ अर्ब ५८ करोड तत्काल उठाऊ !
काठमाडाैं । अर्थ समितिले एनसेलसँगको बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले एनसेलसँगको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको हो।
‘बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले भने अहिलेसम्मका घटनालाई त्यत्तिकै छाड्न नहुने बताए। अदालतले पुँजीगत लाभकर तिराउने फैसाला गरेको छ। तर यो भन्दा अघि किन छुट दिने निर्णयहरु भयो त्यसमा को को संलग्न छ। उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पर्ने माग उनले गरे।